Sidaan baa adiga usoo codsan baasaaboorka dadka shisheeyaha - Migrationsverket
/ Sidaan baa adiga usoo codsan baasaaboorka dadka shisheeyaha
Så ansöker du om främlingspass – somaliska
Markaa dooneysid inaa soo codsatid baasaaboorka dadka shisheeyaha waa inaa adiga soo buuxisaa foomka Codsashada baasaaboorka dadka shisheeyaha, lambarka foomka 190011 [Ansökan om främlingspass, nr 190011], iyo waa in adiga shakhsiyan soo booqataa oo keenta xafisyada Hey’adda socdaalka oo oggolanshada bixiyo midkood.
Haddii aad heysato canug u baahan baasaaboorka dadka shisheeyaha waa inaa codsi gooni canugaas usoo suubisaa. Canug ka yar 18 sano siduu ku heli baasaaboorka dadka shisheeyaha waxaa loo baahanyahay labadiisa waaliid ama waalidka mas’uulka ah oggolanshadooda. Taasna waxaa lagu suubin foomka oggolanshada oo Hey’adda socdaalka u suubinta carruurta ka yar 18 sano baasaaboorka dadka shisheeyaha, lambarka foomka 246011, oo lala keenaayo foomka codsiga.
Oggolanshada in Hey’adda socdaalka u suubinkarto carruurta ka yar 18 sano baasaaboorka dadka shisheeyaha, lambarka foomka 246011 (oo iswiidhish)
Inta aadan soo booqan Hey’adda socdaalka sidaa noogu keentid codsigaada waa inaa wakhti ballansataa. Kuna fikir in dhammaan inta kula codsaneyso baasaaboorka dadka shisheeyaha waa iney ku soo raacaan, carruurta xitaa. Qofkasto waa inuu shakhsiyan codsi keensadaa oo wakhti qaas la siiyo. Adiga waxaa ballamin kartaa dhowr wakhti oo isku xigo.
foomka codsiga, oo aad soo buuxisay iyo soo saxiixday (qofkiiba hal foom)
haddii horey laguugu suubiyay baasaaboorka dadka shisheeyaha
oggolanshada waalidka ama waalidka mas’uulka ah oo codsiga carruurta ka yar 18 sano (foomka oggolanshada in Hey’adda socdaalka u suubinkarta carruurta ka yar 18 sano baasaaboorka dadka shisheeyaha, lambarka foomka 246011)
kobi oo dacwada boliiska oo ey ku qorantahay inuu kaa dhumay baasaaboorkii dadka shisheeyaha (haddii adiga soo codsaneysid mid cusub oo baasaaboorka dadka shisheeyaha oo kii aad haysatey kaa dhumay)Haddii aad haysatid baasaaboorkii oo wadankii hooyo ama mid horey oo baasaaboorka dadka shisheeyaha waa khasab inaa kuwaas i keentid Hey’adda socdaalka. Marmar wuu kaa yeelikara shaqaalaha kobi oo baasaaboorkaada iyo codsigaada, laakin adiga markaasna waxaa lagugu dhihi doonaa keen baasaaboorka rasmiga, markii la gaaro in laga shaqeeyo codsigaada ama markaa soo doonaneysid baasaaboorkaada cusub. Hey’adda socdaalka weey ku sawiri iyo sawiri farahaada marka aad keeneysid codsigaaga. Sawirkaada, farahaada iyo warbixinta shakhsigaaga waxaa lagu keedin elektaroonig ahaan baasaaboorka dadka shisheeyaha. Warbixinadaan lagu ma keedinaayo Hey’adda socdaalka, oo waxey kaliya ku jiran kaarka elektaroonig ahaan. Carruurta oo lix sano ka yar ma u baahna in fara laga sawiro.Dadka inta ugu badan waa khasab iney bixiyaan lacag markey codsanaayaan baasaaboorka dadka shisheeyaha. Adiga kharashkaas waxaa ku bixin kaar markaa codsiga keeneysid, ama laguu soo diri waraaqada lacagta lagu oo dib baa ka bixin lacag. Hey’adda socdaalka waxey bilaabi iney ka shaqeyso codsigaada markaa adiga bixisid kharashka.
Markey Hey’adda socdaalka ka shaqeyneyso codsigaaga oo baasaaboorka dadka shisheeyaha waxey warbixin ka dalban liiska booliiska oo dambiilayaasha iyo kuwa laga shakisanyahay.
Iminka la joogo wakhtiga ey qaadaneyso ka shaqeynta
Go’aanka waxaa laguugu soo diri bostada oo ciwaanka gurigaada. Haddii ey Hey’adda socdaalka go’aamiso inaa xaq u leedahay baasaaboorka dadka shisheeyaha waxaa kuu soo direynaa fa’riin oo inaa baasaaboorka dadka shisheeyaha soo doonankartid. Waxey qaadankartaa ilaa 14 maalmood oo laga soo xisaabinaayo maalintii go’aanka laga gaaray iyo markaa baasaaboorkaada ka soo doonankartid qeybta oggolanshada bixiso oo ah meeshii aad ka codsatay baasaaboorka.
Adiga rafcaan waa qaadankarta go’aanka Hey’adda socdaalka kaliya haddii diidmo lagaa siiyay codsigaadi oo baasaaboorka dadka shisheeyaha iyo codsigaadi sharciga deggenaanshada isla halmar.
Wakhti ballanso sidaa usoo doonatid baasaaboorka
Adiga oo la siinaay baasaaboorka dadka shisheeyaha waa inaa wakhti ballansataa, markaa soo doonaneysid baasaaboorka, intaadan booqasho ugu imaan Hey’adda socdaalka. Kuna fikir waa in qofkasto oo shakhsi oo baasaaboorka soo doonanaayo wakhti ballansadaa. Haddii aad usoo dooneysid carruurtaada baasaabooradooda waa khasab inaa canugkasto shakhsiyan wakhti u ballamisaa, oo baasaaboorkiisa soo dooneysid.
Baasaboorkaaga yar waxaad ka soo qaadanaysaa qaybta oggolaanshaha ama xarunta adeega taas oo ahayd meeshii aad markii hore baasaboorka ka codsatay, haddii aanad helin warbixin sheegaysa inaad baasaboorka meelkale ka soo qaadatid.
Ka soo doono baasaaboorka Hey’adda socdaalka
Adiga waa inaa shakhsiyan baasaaboorkaada soo doonataa. Carruurta ka yar tahay 18 sano baasaaboorka waxaa usoo doonikaro qofka mas’uulka ka ah ama qofka mas’uulka looga dhigay, oo ma u baahna in canuga soo raaco.
Canuga 15 sano ka weeyn wuu soo doonankara baasaaboorka, waa haddii Hey’adda socdaalka u qoran tahay iney waalidka mas’uulka arrintaas ey sheekteen markii codsiga soo gudbinaayeen.
Marka aad adigu doonayso inaad soo qaadato baasaboorka/baasaboorada waa khasab inaad haysato warqad aqoonsi ah oo shaqaynaysa oo adiga ku caddaynaysa.